Buur weyn ayaa kusoo duntay deegaan ka tirsan gobolka Sichuan ee kuyaala koonfur-galbeed dalka Shiinaha(Daawo Sawiro) | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Caalamka Buur weyn ayaa kusoo duntay deegaan ka tirsan gobolka Sichuan ee kuyaala...
Buur weyn ayaa kusoo duntay deegaan ka tirsan gobolka Sichuan ee kuyaala koonfur-galbeed dalka Shiinaha(Daawo Sawiro)
Buur weyn ayaa kusoo duntay deegaan ka tirsan gobolka Sichuan ee kuyaala koonfur-galbeed dalka Shiinaha, waxaana buurtan soo duntay ay aastay guryo badan oo kuyaalay deegaanaasi.
Ciidamada Gurmadka ayaa baadi goob xoogan ugu jira dad badan oo la rumeesan yahay in ay ku hoos jiraan guryaha kusoo dumay, waxaana jira dad laga soo saaray iyaga oo nool dhismayaal iyo dhagxaanta hoostooda.
Buurtan soo duntay ayaa ku habsatay 41 guri oo kuyaala deegaanka Xinmo, waxaana guryahaasi kunoolaa ku dhawaad 150-qof, waxaana la layahay in ka badan 120-qof nolol io geeri halka la helay medadka dhoor qof oo kale.
Kooxaha Gurmadka halkaasi kawada ayaa ku guuleestay in ay soo bad baadiyaan nololna ku helaan dhoor qof oo kamid ahaa dadka deegaanka, waxaana ku jira dadka lasoo bad baadiyay lamaane iyo cunug yar ay dhaleen.
Roob xogan oo ka da’ay deegaanka Xinmo ayaa la rumeesan yahay in uu sabab u ahaa buurtan soo duntay,Mas’uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in buurta duntay ay xirtay laba kilo mitir oo ka mid ah webi halkaa mara.
Deegaanada buuraha ku dhax yaala ee dalka Siinaha ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca musiibooyin , waxaana inta badan sabab looga dhigaa roobab xoogan oo halkaasi ka da’ kuwaas oo sababa in ay soo dumaan buuraha.
, waxaana buurtan soo duntay ay aastay guryo badan oo kuyaalay deegaanaasi.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 24-06-2017
Next articleDiyaaradaha dagaalka Kenya iyo ciidamo lugta ah ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu arkay xuduuda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.